I-OwnBackup: Ukubuyiswa kweNtlekele, ukuTyalwa kweSandbox, kunye noVimba weDatha kwiNtengiso | Martech Zone
I-OwnBackup: Ukubuyiswa kweNtlekele, ukuTyalwa kweSandbox, kunye noVimba weDatha kwiNtengiso
NgoLwesibini, Meyi 25, 2021 NgoLwesibini, Meyi 25, 2021 Douglas Karr
Kwiminyaka eyadlulayo, bendifudusele i-automation yam yentengiso kwindawo eyaziwayo neyamkelweyo ngokubanzi (hayi eyokuthengisa). Iqela lam liyile laphuhlisa amaphulo ambalwa okondla kwaye besisaqala ukuqhuba kwezona ndlela zikhokelayo… de kwehle intlekele. Iqonga lalisenza uhlaziyo olukhulu kwaye ngempazamo lacima inani leedatha zabathengi, kubandakanya neyethu.
Ngelixa inkampani yayinesivumelwano senqanaba lenkonzo (SLA) eqinisekisiweyo yexesha lokugqibela, yayingenayo backup kunye nokufunyanwa kwakhona amandla kwinqanaba leakhawunti. Umsebenzi wethu uhambe kwaye inkampani ayinazo izixhobo okanye amandla okuyibuyisela kwinqanaba leakhawunti. Ngelixa uyilo lwethu lunokuphinda luphunyezwe, lonke ithemba lethu kunye nomthengi umsebenzi wacinywa. Kwakungekho, ewe, akukho ndlela yokuvelisa kwakhona idatha ebalulekileyo nexabisekileyo. Ndiyarhana ukuba siphulukene namakhulu amawaka, ukuba ayizizigidi zeerandi kwingeniso. Iqonga lasikhupha kwisivumelwano sethu kwaye ndayishiya kwangoko inkqubo yeqabane labo.
Ndifunde isifundo sam. Inxalenye yenkqubo yam yokukhetha umthengisi ngoku iqinisekisa ukuba amaqonga anokuba nokuthunyelwa ngaphandle okanye indlela yogcino… okanye i-API eyomeleleyo endinokufumana kuyo idatha rhoqo. Ndicebisa abathengi ukuba benze njalo.
Amaqonga eshishini ahlala ene-backups zenkqubo ngokubanzi kunye neefoto zokugcina ezakhelwe kumaqonga abo okuzikhusela, kodwa ezi zixhobo azifikeleleki lula kubathengi babo. Abanini beqonga leCRM bacinga ngokungalunganga ukuba ngenxa yokuba idatha yabo ye-SaaS iselifu, ikhuselwe.
I-69% yeenkampani ezikwi-Salesforce ecosystem ziyavuma ukuba azilungelanga ukulahleka kwedatha okanye urhwaphilizo.
Iinkampani ezinje ngeSalesforce ziyaphindaphindeka, ziyila izinto ezintsha, kwaye zidibanisa kwinqanaba lesantya kunye namakhulu abaphuhlisi ekunokwenzeka ukuba kuphuculwe kwaye kugcinwe ikhowudi efanayo yabathengi ukuba bagcine kwaye bakhusele idatha yabo. Ingqwalasela yabo kukuzinza kwenkqubo, ixesha elongezelelekileyo, ukhuseleko, kunye nokwenza izinto ezintsha… ke amashishini kufuneka ajonge kwizisombululo zomntu wesithathu kwizinto ezinje ngokulondolozwa.
Kubalulekile ukucacisa ukuba i-Salesforce ayingoyena nobangela wokulahleka kwedatha. Ngapha koko, andikhange ndibabone ngengozi batshabalalisa idatha yabathengi. Ukukhutshwa kwedatha kuye kwenzeka amaxesha ngamaxesha, kodwa andikayiboni intlekele (enkqonkqoza emthini). Kananjalo, i-Salesforce inezinto ezithile ezinokuzithumela ngaphandle kwidatha eninzi enokusetyenziswa, kodwa ayilunganga njengoko ifuna ukwakhiwa kwesipele, ukuhlela, ukunika ingxelo, kunye nezinye izakhono ezijikelezileyo ukuze zizaliswe isisombululo sokubuyiselwa kwentlekele.
Zeziphi ezona zisongelo zedatha yeshishini?
Iintlawulelo zokuhlaselwa Idatha ebaluleke kakhulu kunye ne-ethe-ethe ijolise kuhlaselo lwe -hlengo.
Ukucinywa ngengozi Ukubhala ngaphezulu okanye ukucima idatha kuhlala kwenzeka ngengozi ngabasebenzisi.
Uvavanyo olubi Ukuhamba komsebenzi kunye nokusetyenziswa kwandisa ithuba lokulahleka kwedatha ngokungachanekanga okanye urhwaphilizo.
Abaxhasi -Iipolitiki okanye ezentlalo ezikhuthaza ukubhengeza okanye ukutshabalalisa idatha.
Abangaphakathi ngaphakathi -Abasebenzi bangoku okanye ababesakuba ngabasebenzi, iikontraki, okanye abantu abasebenza nabo abanokufikelela ngokusemthethweni banokubangela umonakalo xa ubudlelwane buwohloka.
Izicelo ezinamandla -Ukutshintshiselana ngamandla kwezicelo zomntu wesithathu, kuhlala kukho ithuba lokuba iqonga lingasusa ngengozi, libhale ngaphezulu, okanye lonakalise idatha yakho ebalulekileyo.
Ngombulelo, iiSalesforce's I-API-yokuqala indlela yophuhliso iqinisekisa inqaku ngalinye okanye into yedatha ifikeleleke ngokupheleleyo kuluhlu olubanzi lwe isinxibelelanisi senkqubo yokusebenza (APIs). Oko kuvulela abantu besithathu ithuba lokuba bathathe umsantsa ekubuyiseleni kwintlekele… Eyakho iBackup ugqibile.
I-OwnBackup ibonelela ngezi zisombululo zilandelayo:
Ugcino lwentengiso kunye nokuBuyisa kwakhona -Khusela idatha kunye ne-metadata ene-backups ebanzi, ezenzekelayo kunye nokubuyisa ngokukhawuleza, ngaphandle koxinzelelo.
Iintengiso zeSandbox Seeding -Sasaza idatha kwiibhokisi zesanti zokukhawulezisa izinto ezintsha kunye neendawo ezifanelekileyo zoqeqesho kunye neSandbox Seeding eyandisiweyo.
Ukugcinwa kweDatha yokuThengisa -Gcina idatha ngemigaqo-nkqubo yokugcina egcinwe kuyo kunye nokuthotyelwa okwenziwe lula kwi-OwnBackup Archiver.
Ngoku ukuba iCargill isebenzisa i-OwnBackup asisoze sikhathazeke ngokulahleka kwedatha kwakhona. Ukuba sinomcimbi, sinokuthelekisa ngokukhawuleza kwaye sibuyisele idatha konke ngaphandle kokuphelisa naliphi na ixesha lokuphumla kwedatha.
UKim Gandhi, uMthengi onguMnini weQhinga leMveliso kwiCandelo leCargill FIBI
I-OwnBackup iyakuthintela ekulahlekelweni kwedatha ye-Salesforce CRM kunye nemethadatha enezixhobo ezizenzekelayo kunye nokubuyisela ngokukhawuleza, ngaphandle koxinzelelo… ngamaxabiso alungele kwinqanaba lomsebenzisi.
Cwangcisa iDemo ye-OwnBackup
tags: etshintshingabakhozingaphakathi ngaphakathi ngolunyaukhupheloukuvavanywa kakubiransomwareizicelo ezinamandlaukuthengisaindawo yokuthengisai-backups zokuthengisaUgcino lwedatha yokuthengisaukubuyiswa kwentlekeleimbewu yokuthengisa imbewu yesanti
Izifundo ezifundiweyo: Amaqonga amaNzululwazi kwiNtlalo kunye neBlockchain Mass Adoption